Iskuulka doorashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 29 juni 2006 kl 09.51
Sidey doorashadu uga dhacdaa dalkan? Yaa la dooran karaa? Yaase wax dooran kara? Ajnabiga? Iswiidhishka dalka dibaddiisa ku dhaqan? Xisbiyadda doorashada u sharraxan? Maxey ku kala fikir duwan yihiin? Jawaabaha su’aalahaa dhammaantood waxad kaga haqab baxeysaa halkan:
Waxaa jira shuruuc kala duwan ee xadidda habka doorashooyinka saddexda ah ee kala duwan. Tusaale waxaa taa noogu filan in doorashada degmooyinka ey ka codeyn karaan cid aan heysan dhalashada dalkan, balse aaney ka codeeyn kareyn tan baarlamanka cid aan heysan baasaboorka dalkan.
Waxaad dalkan codkaaga ka dhiban kareysaa wakhtiyoiyo goobo kala duwan. Tusaale ahaan waxaad codkaaga dhiiban kareysaa maalinta doorashada iyo goobaha doorashada ama wakhti ka horreeya goobo loogu talagalet. Waxaad kaloo codkaaga ku dhiiban kareysaa boostada ama ruux aad wakiilatey.
Iswiidhen kama jiraan shuruuc xaddidaya inaad xisbi cusub abuurto.Taa macnaheedu waxey tahey in ciddii doonta ey ama abuuri karto ama xubin ka noqon karto xisbi. Waa suurtagal in xisbi leeyahey oo keliya laba xubnood sharciguna u aqoonsado xisbi ahaan. Xisbi waxaa lagu tiriyaa sita jaaliyad fikireed.
waxa jira xisbiyo badan, kuwo wadankoo dhan ka hawlgala iyo kuwo degaan gaar ah ku eg, waxana diiwaan gashan illaa 200 oo xisbi diiwaangashan.
Doorshadii u dambeysey 7 xisbi oo keliya ayaa ku guulaystey gelidda baarlamaanka- waa in xisbigu helaa ugu yaraa 4 % codka dadeynaha. Xisbiyadaasi waa kuwan:
Maalinta kamadambaysta ah ee xisbiyadu soo gudbin karaan musharaxiintooda
Sidee loo codeeyaa?
Dhisidda xisbi cusub
Xisbiyadee ka qayb qaata doorashooyinka?